Serge Marshennikov wuxuu ka hadlayaa dumarka mid kasta oo ka mid ah sawiradiisa saliida | Abuurista khadka tooska ah
Muuji sawirka dumarka oo matalo dhamaan bilicdeeda saliida waa wax aan sahlaneyn in la gaaro. Waxay u baahan tahay farsamo fara badan haddii aan u tagno hyper-realism oo waxaan dooneynaa inaan ku dhowaad ka qaadno shiraacyada kuwa ugu dhow ee muuqaalka muuqaalka muujiya ee u muuqda inay ku fadhiyaan sariirtaas laalaabkeeda iyo laalaabkeeda, sida aan ka helno Serge Marshennikov sariirtiisa shaqada.
Marshennikov wuxuu noogu yeerayaa inaan wax ka qabanno taas barashada jirka haweeneyda iyo kuwa maalinlaha ah taasi waxay iskaga tagi kartaa naftiisa illaa iyo hada oo aan ilbaqayn iyadoo la ilaalinayo mid kasta oo ka mid ah faahfaahinteeda Haweeneyda waxay ku dhex muuqataa qaabkeedii ugu quruxda badnaa iyadoo lagu sawirayo farshaxanyahankaan u dhashay Ruushka ee ku guuleystay hanashadiisa dalkiisa.
Serge isaga ayaa sii waday waxbarashada mid ka mid ah akadeemiyadaha ugu caansan fanka adduunka, Akadeemiyada Saint Petersburg ee Farshaxanka Fiican ee Ruushka. Rinjileeye abaalmarinno la siiyay marar badan loona magacaabay "Top 30" ee Bulshada Sawirka Mareykanka sanadkii 2008.
Su rinjiyeynta ayaa iska hadleysa iyo sawirada jilicsan ee saliida dumarka waxay nagu hogaaminayaan hanashada weyn dhinac walba.
Qaybaha farshaxanka aan la tirin karin iyo shiraacyada uu Marshennikov u hibeeyay haweenka isagoo muujinaya sida uu u jecel yahay inuu dumarka ka soo afjaro dhulka inuu ugu keeno wejiyada uu ka soo iibsado gacantiisa iyo hadiyadihiisa midabka leh.
Qaar badan oo ka mid ah sawirada ayaa leh moodooyinkooda hurdo iyo jiifo nasashadaas weligiis waara.
Rinjiyeye yaa leh lagu iibiyay xaraashyada ugu caansan adduunka sida Christie iyo Bonham.
La jawi laga soo qaado shiraacyadiisa sidoo kale waa mid aad u culus.
Waad awoodaa raac shaqadaada ka Facebook.
Fanaaniinta kale ee xurmeeya naagtii uu Vincent Romero y Pang Maokun qaababkeeda kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Quruxda iyo macaanida haweenka ee sawirka saliida macaan ee Serge Marshennikov